मञ्च राजनीति- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
हाम्रो देशको इतिहासका अनेक कालखण्डमा महिलाहरूले आफ्नो ज्यान बाजीमा राखेर राष्ट्रका लागि लडेका थिए । तर, त्यस्ता पात्रहरू सधैँ नेपथ्यमै बिलाए । शक्ति र सत्ता सम्हाल्नेहरूमा अन्तत: पुरुषहरू नै अगाडि हुन्छन् ।
असार ३०, २०७५ कुमारी लामा
काठमाडौँ — संगीन विषय भएको छ महिला सहभागिताका कुरा । बारम्बार उठ्दै छ प्रश्न सार्वजनिक मञ्चमा महिलाहरूको एकदमै न्यून उपस्थितिका विषय । महिला वक्ता नराखिएका साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता नजनाउने प्रतिबद्धता गर्नेहरूको पनि सूची लम्बिँदै छ । हरेक क्षेत्रका महिलाहरू आफ्नो स्पेस खोजिरहेका छन् र आवाज मुखरित गरिरहेका छन् । तर यति हुँदाहुँदै पनि फेरि उनीहरू मञ्चहरूबाट टाढाटाढा नै छन् ।
राजनीतिक दलहरूभित्रको जड पुरुष प्रवृत्ति त हालसालै एक भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय तहमा परेका महिला संख्याले पनि छताछुल्ल परिसकेको छ । त्यस्तै व्यवहार, समतामूलक, न्यायिक समाज निर्माणको वकालतमा लागिरहेका साहित्यकारका वृत्तमा पनि निकै हावी देखिन्छ । हालै राजधानीमा भएको एक अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनीमा राखिएका सेसनहरूमा मुस्किलले एक–दुई महिला वक्ता या सहजकर्ता पर्नुले पनि उही संकेत गरिसकेको छ । पुस्तक विमोचन होस् या बहस कार्यक्रम— महिलाहरू बहिष्करणमै परिरहेका हुन्छन् । किन यस्तो (?) भन्ने प्रश्न उठाउँदा आयोजकहरू भन्न पछि पर्दैनन्, ती विषयमा बोल्न सक्ने महिला नै भेटिएन । केको आधारमा भने हुनन् कि बोल्न सक्ने महिला नै भेटिएनन् ?
पुरुष वक्ताहरू हरेक विषयका ज्ञाता अनि महिलाहरूका लागि भने केही सीमित विषय मात्र ठीक भन्ने मानसिकता उदेकलाग्दो छ । मञ्च ठूलो होस् या सहरमा हुने साहित्यिक कार्यक्रमहरू नै सबैतिर उस्तै देखिन्छ दृश्य । झन्डै आधा दर्जन पुरुषहरू मञ्चमा पुस्तक विमोचनपछि आफ्ना लम्बेतान भाषण फलाकिरहँदा महिलाहरू भने चुपचाप उनीहरूको कुरा सुनिदिनुपर्ने श्रोता मात्र भएका देखिन्छन् ।
के यो मञ्च राजनीति हैन ?
न्यायिक क्षेत्रबाट अवकाश प्राप्त गर्नुभएकी सत्यभामा माथेमाले जिल्ला न्यायाधीश भई विभिन्न जिल्लामा पुग्ने क्रममा बारम्बार सुन्ने एउटै कुरा थियो, न्यायाधीश त आइमाई पो ? त्यही आइमाई पो भन्ने प्रश्नसँग जुझ्दै अघि बढेर उहाँले लामो समय त्यही क्षेत्रमा काम गरी अवकाश प्राप्त गर्नुभयो ।
यो त मात्र एक उदाहरण हो । माथेमाजस्तै विभिन्न क्षेत्रका उच्च पदमा पुगेका महिलाहरूले सबैभन्दा पहिला सामना गर्ने गरेको कुरा नै उनीहरूको क्षमतामाथिको प्रश्न । लिंगकै कारण महिलाहरूको क्षमतामाथि प्रश्न उठाइनुपछाडि हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान लुकेको छ । निरंकुश पितृसत्तात्मक जड मानसिकता व्याप्त हाम्रो समाजमा महिला सधैँ नै दोस्रो दर्जामै रहे । उनीहरूको अस्तित्व र पहिचान सधैँ नै चुलोचौकोकै चारभित्ता र तरकारीको झ्वाइँसँगै बाफ भएर बिलाइरह्यो । आज देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक भइसक्दा पनि राज्यका उच्च पदमा आसीनहरूमा उही निरंकुश मानसिकतासहितको रवैया देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा राजनीतिक विश्लेषक डा. जीवलाल बस्याल भन्नुहुन्छ—‘महिलाहरूको क्षमतामाथि आग्रहपूर्ण ढंगमा अविश्वास गरिन्छ । जसको परिणाम उनीहरूले आफ्नो क्षमता देखाउने अवसर नै पाउँदैनन् ।’
क्षमता भएकाले देखाउने मौका पाउँदैनन् भने केही गर्न उत्साहित महिलाहरू पनि बारम्बारको प्रश्न र अविश्वासबाट हच्किन्छन् । उनीहरूको मनोविज्ञानमा रोपिँदै जान्छ महिलाका असक्षमताका कुरा । फलस्वरूप मौका पाउँदा पनि उनीहरू निणर्य लिन या ती पदका लागि दाबी गर्न आँट्दैनन् । यो हाम्रो समाजको मात्र नभई विकसित मानिएका अन्य समाजको पनि यथार्थ हो । अमेरिकी प्रोफेसरद्वय फक्स र ललेसको २०११ को रिसर्चले पनि त्यही देखाउँछ । उनीहरूका अनुसार महिलाहरूमा भएको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाको कमी र राजनीतिक पदहरूका लागि कम इच्छुक हुनुका पछाडि उनीहरूमा आत्मविश्वासको कमीसाथै राजनीतिक संस्थाहरू चलाउन आँट र उत्साह नै नभएका कारण हो । तर, यही खोतल्नुपर्ने कुरा के भने, महिलाहरूमा आत्मविश्वासको कमीको पछाडिका कारण के त ? सायद यो बहसको अर्को विषय बन्ला ।
धेरै अवस्थाहरूका कारण एकातिर महिलाहरू अवसरबाटै बन्चित हुन्छन् भने अर्को जसले केही गरेका छन् उनीहरू पनि इतिहासका पानाहरूबाट लापता पारिन्छन् । हाम्रो देशको इतिहासका अनेक कालखण्डमा महिलाहरूले आफ्नो ज्यान बाजीमा राखेर राष्ट्रका लागि लडेका थिए । तर, त्यस्ता पात्रहरू सधैँ नेपथ्यमै बिलाए । शक्ति र सत्ता सम्हाल्नेहरूमा अन्तत: पुरुषहरू नै अगाडि हुन्छन् ।
पूर्वी मध्यकालको चौधौँ शताब्दीमा नै नेपालको राजकाजमा महिलाहरूको प्रमुख हात थियो । जयादित्यदेवकी विधवा वीरम्मादेवीदेखि भक्तपुरकी नाबालिका राजकुमारी राजल्लादेवीलाई काखमा राखी शासन सम्हालेकी शक्तिशाली शासक देवलदेवीहरू थिए दरबार शासन सत्तामा । देवलदेवीले त्यस समय भइरहने मुसलमानहरूका अनेकन आक्रमणहरूको सामना गर्दै कुशल शासन सम्हालेकी थिइन् भन्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् नेपालनिरुपणमा इतिहासविद् ज्ञानमणिनेपालले । महारानी राजेन्द्र राज्यलक्ष्मीले पनि नाबालक छोरालाई काखमा लिई शासन चलाएकी थिइन् । शासन मात्र चलाएकी हैनन्, उनले त ससुरा पृथ्वीनारायण शाहले लिएको राज्य विस्तार अभियानलाई समेत अगाडि बढाइन् । तर, आज उनको त्यत्रो योगदान इतिहासको गर्तमा कतै बिलाएको छ । फेरि पनि उनीहरूको योगदानलाई बिर्सिएर क्षमतामाथिको आशंकामा नै ल्याएर टुंग्याइदिन्छ समाज । इतिहसवेत्ता कमलप्रकाश मल्लको लेख नेपाली समाजमा बुद्धिजीवीभित्रको एक प्रसंग यस्तो छ :सन् १७७५मा पृथ्वीनारायण शाहको स्वर्गारोहण हुँदा गद्दीका उत्तराधिकारीहरूमा धेरैजसो नाबालक नै भए । रिजेन्ट बनेका उनका आमाहरूमा शक्ति सञ्चित पुग्यो । राजनीति तथा राज्यव्यवस्थाका अनुभवको अभाव भएका यी राजमाताहरूलाई सहजै प्रभाव पार्न सकिन्थ्यो । परिणामस्वरूप रिजेन्सी कालभरि नै (सन् १७७५ देखि १८४५ सम्म) गद्दीका लाािग परस्पर विनाशकारी होड चली नै रह्यो ।
मल्लजस्ता विद्वान्बाट महारानी राजेन्द्रलक्ष्मीको योगदानलाई नजरअन्दाज गरी उनको अनुवभहीनताका कुरा अगाडि ल्याउनु निकै दु:खदायी कुरा हो । यसैगरी हाम्रो समाजले महिलाहरूको क्षमतामाथि बारम्बार प्रश्न उठाउँछ र उनीहरूको योगदानलाई सिमानामा धकेलिदिन्छ ।
हाम्रो देशले बेहोरेको दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समय ज्यानको बाजी राखी युद्धमा होमिएका थिए धेरै–धेरै महिलाहरू । कतिले शहादत प्राप्त गरे, कति बेपत्ता भए, कति भने अयोग्य ठहरिए । र, अन्तमा पद, प्रतिष्ठा र शक्तिको केन्द्र पुग्ने मौका फेरि पनि अधिकांश पुरुषहरूकै भागमा पर्‍यो । अहिले दुई कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय तहमा नेपालको संविधानले तोकिदिएको प्रतिशतभन्दा कम महिलाहरू पर्नु आफैंमा एक विडम्बना भएको छ । विभिन्न बहानाबाजीमा महिलाहरू मूल राजनीतिक मञ्चबाट टाढा पारिइरहनु पक्कै महिलामाथिको ठूलो षडयन्त्र हो । यो मञ्च राजनीति, धेरै कुरा परिवर्तन भइसक्दा पनि बद्लिन नसकेको महिलालाई सधैँ देस्रो दर्जामा नै राखिराख्न चाहने निरंकुश पितृसत्तात्मक संकीर्ण मानसिकताकै उपज हो ।
केही तीता कुरा
गुट राजनीतिले आक्रान्त छ समय । राजनीतिक गुट, साहित्यिक गुट, अनेकन संघसंस्था नामका गुट उपगुटहरू छ्याप्छ्याप्ती भएका छन् सहरमा । तर अधिकांश महिलाहरू गुट र झुन्डहरूतिर झुम्मिन भ्याउँदैनन् । केही परिधि, केही घेरा र केही जिम्मेवारीका देखिने नदेखिने दायराहरूले उनीहरूलाई खिचिबस्छ । बिहानको चिया गफमा भेटिने समूहबाट उनीहरू टाढै हुन्छन् । साँझ हुने ककटेलसहितका पुस्तक विमोचन होस् या छलफल भेटघाट कार्यक्रमहरू उनीहरूले परैबाट पन्साउनुपर्छ । केही दिनका लागि घरबाहिरका कार्यक्रमहरूमा भाग लिनुअघि धेरै कुराको चाँजोपाँजो मिलाएर निस्कनुपर्छ । उनीहरूले त छानी–चुनी समय अड्कलेर र समयमा नै घर छिर्ने प्रतिबद्धतासहित निस्कनुपर्छ घरबाट । साँझ झ्याप्पै परिसक्दा पनि घर फर्किने खास हतारो मान्नु नपर्ने पुरुषहरूविपरीत महिलाहरू गुँड फर्किने चटारोमा हुन्छन् । सहरका धेरै कविता कार्यक्रमहरूमा बोल्ड कवितावाचन गर्ने कवि विना थिङको दिन ढल्दै जाँदा बढ्दै जाने सकस र घर दौडिजाने हतारलाई मैले धेरै पटक नियालेकी छु ।
उनीजस्तै हतार–हतासको दौडमा भेटिन्छन् अरू धेरै महिलाहरू पनि । यस्ता घर–चुलो जिम्मेवारीले अचेटिएका महिलाहरू अनेक बौद्धिक बहस, छलफल, चिन्तन मन्थन, सम्बन्ध र जान पहिचान अगाडि बढाउने धेरै कुराहरूबाट पछाडि छुटिसक्छन् । उनीहरूसँग स्वाध्ययनका लागि पनि पर्याप्त समय हुँदैन न त बहस विमर्शमा भाग लिने र सुन्ने समय नै । चिन्तन, विमर्श, नयाँ अनुभव र अध्ययन अनुसन्धानबाट उनीहरू पछि पर्दै जान्छन् । जुन कुराबाट क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ, आत्मविश्वास बढ्छ त्यस्ता कार्यहरू नै महिलाको भागमा नपरेपछि स्वत: उनीहरू मात्र आदेश पालना गर्ने र थपडी बजाउने झुन्डमा परिणत भइहाल्छन् । मञ्चमा भाषण दिने, बौद्धिक, चिन्तनशील भनिने कामबाट पुरुषहरूको पोल्टो भरिरहन्छ । तर, यही मनन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा, महिलाको यस अवस्थाको जिम्मेवार को ? उनीहरू किन यसरी बहिष्करणमा परिरहेका छन् ?
निश्चय नै जिम्मेवार हाम्रो समाज हो, संस्कृति हो, हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान हो । महिलाहरूमाथि थोपरिएका सांस्कृतिक, सामाजिक मूल्य–मान्यताहरू हुन् । हालै प्रकाशित सरस्वती ज्ञवालीको जीवनी ‘लालटिनको उज्यालोमा’ भित्रका कुरा निकै धेरै नेपाली महिलाहरूको जीवनसँग मेल खान्छ । उनी थिइन् एक सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता तर बिस्तारै घरभित्र सीमित भएर रहिन् । उनले पूर्णकालीन घर सम्हालेसँगै श्रीमान्ले राजनीतिक खुड्किलो उक्लिँदै गए तर उनी घरमै सीमित भइन् र भइन् राजनीतिक मञ्चबाट ओझेल ।
धेरै महिला साहित्यकारहरूको अवस्था पनि उस्तै छ । घर र जिम्मेवारीबाट थिचिएपछि चल्दै गरेको कलम पनि रोक्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ महिलाको । कार्यक्रम, समूह र गुटहरूका पछाडि भागदौड गरिबस्न पनि भ्याउँदैनन् उनीहरू । सम्बन्ध, सम्पर्क र गुटमा नभएपछि क्षमतावान् महिलाहरू पनि ओझेलिँदै जान्छन् । सीमान्तकृत हुँदै जान्छन् । त्यसैले धेरै कार्यक्रम आयोजकहरूलाई मुखमा रेडिमेड उत्तर बोकी हिँड्न छुट भएको छ, त्यस विषयमा बोल्न सक्ने महिलै भेटिएन ।
प्रकाशित : असार ३०, २०७५ ०९:४१
वैशाख १, २०७५ कुमारी लामा
काठमाडौँ — प्रश्निल गुनासो पोख्छे युवती पुरुषसँग (सामीप्य बढिसकेपछि) किन परिचय गर्नबाट तर्किनुभएको थियो ? जवाफमा पुरुषले कुरो खोल्छ, म तिमीलाई बजारु केटी ठान्थें । म रन्न हुन्छु । र, आफैंतिर प्रश्न तेर्साउँछु ।
कस्तो थियो होला त्यस युवतीको लवाइ या बोलाइ जसले उसलाई बजारु देखायो ? कि त्यो एलिट पुरुष दम्भ त थिएन ? (ती युवती थिइन् पारिजात र पुरुष त्यसबेलाका चर्चित कवि भूपि शेरचन)
पूर्व चैनपुरबाट गएका तामाङ बूढाका सन्तानहरू जो दार्जिलिङ लिङ्गिया चिया बगानको त्यस घरमा हुर्कंदै थिए । एउटी थिई असाध्यै चञ्चल र अर्की साह्रै आफैंमा मात्रै हराउने केटी ।
मिथ र रियालिटीको पर्दा
कति अचम्म लाग्छ जब कसैप्रति एकाएक अनेकन कथाहरू बुनिन थाल्छन् । र ती पात्र बजारमा अर्कै भएर छाइसकेकी हुन्छे । जहाँ पहिल्यै रियालिटी र मिथबीच
पर्दा खसिसक्छ ।
पारिजात त्यस्तै पात्र भइन् जसबारे अनेकन अनेकन कथाहरू बुनिए । अनेकले अनेक तरिकाले बुझे र अफ्वाह फैलाए । सबभन्दा घृणित कुरा त उनको चरित्रलाई लिएर कुरा भए । लेखक आहूतिले उनको एक अन्तर्वार्तामा खुलाएका छन् पारिजात सबैसँग सुत्दै हिँड्ने आइमाई हो भनी परिचय गराइदिएका थिए रे एक अग्रजले उनलाई । त्यसपछि धेरै समय लागेको थियो उनलाई पारिजातबारे त्यस बनिबनाऊ दृष्टिकोणको घेरा तोडेर निस्कन ।
किन थियो होला त्यस समय त्यो साहित्यिक घगडानहरू एक रोगी युवतीसँग त्यत्ति त्रस्त ? र, अनेकन किस्सा जोडिदिइहाल्थे उनको चरित्रमा ? कि पाएका थिए संकेत कि यी नपत्याउँदी दार्जिलिङे युवतीले साहित्यमा उथलपुथल नै ल्याउनेवाला छे ?
पारिजात बाहिरियाको नजरमा मात्र हैन आफ्नै घरपरिवार छरछिमेकमा पनि अर्कै थिई । उनका बाबु डाक्टर के.एस. वाइबा उनलाई सेन्टिमेन्टल फुलदेखि बिग्रेको दार्शनिकसम्म भन्न बेर लाउँदैन थिए । उनका दिदीहरूले उसलाई लाटी भन्थे । चर्चित कवि तथा चित्रकार वीरेन्द्र सुब्बाले त उनलाई हाफब्रेन नै भन्थे । यी सम्बोधनहरू मुख्यत: एक किशोरी पारिजातका लागि थिए । ऊ सानै बेलादेखि अरूभन्दा भिन्न अन्तर्मुखी, कुरा बोल्न भन्न केही नसक्ने, तर भयङ्कर नै कल्पनाशील थिई ।
बहिनी सुकन्याका लागि भने ऊ बेग्लै थिई । अरूले सोच्ने र बुझेको भन्दा भिन्नै । चौध–पन्ध्र वर्षको कलिलो उमेरबाट सुरु भएको जोर्नीको दुखाइले जब पच्चीस छब्बीस पुग्दा पूरै हलचल गर्नै नसक्ने गरी निरीह पारिदियो तब त्यस घोर निराशाका क्षण उसले भनीसुकन्या म पराजित जन्मेकी रहेछु ।
तब सुकन्याले दिदीलाई थप्थपाउँदै भनेकी थिई :तिमी पराजित हुनै सक्दैनौ, तिमी अपराजिता हौ । (एउटा चित्रमय सुरुवात) मिथ र रियालिटीबीचकी पारिजात यसरी सुकन्याका निम्ति भने सधैँ अपराजिता पारिजात नै रही ।
पूर्व चैनपुरबाट गएका तामाङ बूढाका सन्तानहरू जो दार्जिलिङ लिङ्गिया चिया बगानको त्यस घरमा हुर्कंदै थिए । एउटी थिई असाध्यै चञ्चल र अर्की साह्रै आफैंमा मात्रै हराउने केटी । तर अब त्यो घर, त्यस घरकी मुली (आमा) सबै सम्झनाबाट पनि धमिलिइसकेको छ । कान्छी छोरी जन्माएपछि आमा बितिन् । मन बिग्रिएका बाबुले टाढाको लिम्बू बस्तीको तीनकोठे घरमा सारे ।
अब त्यस घरमा इष्ट देउता छैन, परम्परा, संस्कार केही छैन । सबैभन्दा ठूलो कुरा आमा छैनन् । कडा र घमण्डी मेडिकल प्राक्टिसिनर बाबु छन् । घरमा शोषण छैन तर कडा छ उनको अनुशासन । युद्धका कथा हाल्छन् बाबु । माक्स, एंगेल्स पढ्छन् । सुँगुरको मासु नचल्ने तामाङको चुलोमा त्यसैको भोज लाउँछन् । देउतालाई पानी चढाउने कचौरामा दाल हाल्न थालिन्छ । आफूभन्दा तल्लो स्तरका साथीहरूसँग खेल्न बोलन दिँदैनन् बाबु । घरमा बेस्सरी हाँस्नु, नाच्न गाउन मनाही छ । अर्कैअर्कै छ घरको माहोल । वन जंगल डुल्नु, काँडा बिज्नु, जुका लाग्नु, गट्टा, पुतली खेल्नु, बिरामीको बहाना बनाएर स्कुल छुटाउनु सबैसबै भ्याइदिन्छे ऊ । तर बिस्तारै बहाना गर्नै पर्दैन अब त कहिले कान दुख्छ कहिले आउँ पर्छ । बिरामी भै बस्छे ।
हस्तलिखित पत्रिका चलाउने दाजुहरूले लेख्न भन्छन् । कविता लेख्छे, कथा लेख्छे तर पढेर साथीहरू हाँसिदिन्छन् । झन् संकोच बढ्छ । कोर्सको किताब पढ्न मन गर्दिन तर अरू किताब पढ्ने लत बढ्दै जान्छ । धरणीधर, लेखनाथ, किट्स, सेलीका कविता पढ्छे । लेख्छे अनि हस्तलिखित पत्रका लागि पठाउँछे । प्यारेलाल आबाराहरूबाट सुरु भएको उसको पढाइ यात्रा अब प्रेमचन्द, वृन्दावनलालतिर पुगिसकेको छ । साथीहरूका लागि प्रेमपत्र लेखिदिन थालिसकेकी छ । चुरोट पिउन पनि थालिसकेकी छ । बहुत कल्पनाशील भएकी छ । बतासजस्तो जीवन बितिरहेको जस्तो लाग्छ उसलाई ।
सात कक्षामा फेल हुन्छे । तेह्र वर्ष पुग्दा त आफू तरुनी भएको जस्तो मान्छे । स्वतन्त्रता चाहन्छे । गमलामा साँघुरिएको फूलजस्तो देख्छे आफूलाई । अस्तित्वबोध जस्तो, आफ्नो शरीरप्रतिको मोहजस्तो केही फैलिन्छ ऊभित्र । तेह्र–चौध वर्षमै । कसैले छोएर माया गर्नै पर्दैन यो मेरो शरीर हो, यस शरीरको म मालिक हुँ भन्ने किसिमको एउटा घमण्डी अनुभव मनमा पसिसक्छ ऊभित्र । (धुपी सल्ला र गुराँसको फेदमा, निर्माण, पृष्ठ १८) किशोरी संसार, कल्पनाको उडान, स्वतन्त्रताको तीव्र चाहना, प्रेम जस्तो केही अनुभूति तर एकै पटक नभेटी, केही पत्राचारमा यसै टुङ्गिएको प्रेमील समय । बिस्तारै महसुस हुदै जान्छ बाबुको आर्थिक समस्या तर मन न हो उड्न दौडन छोड्दैन । भात भान्सा, सिलाइ–बुनाइ सबैमा पोख्त भइसकेकी छ अब त । उमेरसँगै संकोच र घेराहरू बढ्दै छन् । पहिलेजस्तो रनवन दौडिन छाडेकी छ । र, रमाइलोरमाइलै समयमा एक रात सुटुक्कै पसिदिन्छ त्यो घातक दुखाइ देब्रे कुहिनोबाट । के थाहा र उनलाई त्यही दुखाइ नै हुनेछ जीवनलाई नै जाम पारिदिने नशालु दुखाइ ।
त्यस परिवारको एक मात्र छोरोको मृत्युपछि डाक्टर बाबु नराम्ररी टुक्रिएका छन् । अब आफ्नो दुखाइको कुरा गर्ने समय छैन । बिरक्तिएका बाबु नेपाल छिर्छन् । रुमानी समयमा रमाउनुपर्ने किशोरी सुकन्या र पारिजात भकुन्डो जत्तिकै यता र उता भौंतारिन्छन् आफन्तहरूकोमा । दिदीको घरमा बस्दा परपीडक भिनाजुको शासन र अत्याचार देख्छन् आफ्नी दिदीको दुर्दशा अनि झन्झन् बढी पीडाबोध साथै रातभर निद्रा नलाग्ने समय सुरु हुन्छ उसको । मन बिग्रिनु, पढ्न नसक्नु, म्याट्रिक फेल हुनु, शरीरमा बिरामी रोपिनु । धेरै कुराहरू भइसक्छ कलिलै उमेरमा । त्यसपछि २०११ साल मंसिरमा ऊ आइपुग्छे अर्को बिरानो ठाउँ, काठमाडाैं।
बिस्तारै बिरानोबाट आत्मीय हुन थाल्छ पुतलीसडक । बोलीचाली फेरिएको छ । मटरमार चुरोट उडाउन थालेकी छ ऊ । तर एक खाले निराशाले गाँजिबस्छ । एक्लोजस्तो । जब सुकन्या २०१२ सालमा नेपाल आउँछिन् तब सबै पहिलेजस्तै सहज लाग्न थाल्छ । तर डाक्टर बाबुको अभिमान उस्तै छ । क्लास मेनटेन गर्नुपर्छ उनलाई । उनको अनेकन मेडिकल रिसर्च चलिबस्छ । तर आम्दानीको स्रोत छैन । काकाका छोरा दाजुले आश्रय दिएका छन् तीनतीन जनालाई । गाह्रो छ समय । आईए भर्ना भएका छन् दुई बहिनी । तर एउटै साडी दुवै जनाले समय मिलाएर लाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
दाल–भातसम्म त पाइन्छ दाजुबाट तर भातपानीबाहेकका जिउँदै छन् अनेकन रहर जो उसै रहन्छन् । पैसा नहुनु र चुरोटको तलतलले गाँज्नु । धन्न घरमा काम सघाउने केटीले पनि चुरोट पिउँछे र उसलाई भर हुन्छ । साथी बनेकी छ पर्दाभित्रकी दया सिंह । बाहिर निस्कँदा पनि सुसारेसहित हिँड्नुपर्छ उसले । पद्मकन्यामा आईए पढ्दा रोपिएको मित्रता, बहुत सप्रन्छ । सँगै चुरोट पिउनु, गफ्फिनु, कविता लेख्नु र जिप रिजर्भ गरेर वनकाली घुम्न जानु, वर्षामा भिज्दै पुतलीसडक भद्रकाली वारपार गर्नुजस्ता मीठा पलहरू छन् उनीहरूका । बिस्तारै सुकन्या जागिरतिर लाग्छिन् तर पारिजात घरमै । शरीरको दुखाइ बढ्दो छ अनि बढ्दो छ निराशा । त्यसै बखत भ्याइसकेकी छ पढेर गोर्की, तोल्सतोय, कन्फुसियस, सांकृत्यायन, बुद्ध दर्शनहरू, उपनिषद्, ताओइज्म, र पढ्ने गरेकी छ फ्रान्सेली र रसियन साहित्य पनि । नेपाली लेखकहरूप्रतिको रुझान उस्तै छ । उसलाई मन पर्छ भीमदर्शन रोक्का, वासु शशि र भूपि
शेरचनका कविताहरू ।
नेपाली पढाउने गुरु चित्तरञ्जन नेपालीले उसको कविता धरतीमा छापिदिन्छन् । पढ्ने लेख्ने जोस झनै बढेर जान्छ । सुकन्या र दयाले लेख्न कर गर्छन् । र, लेखिदिन्छे पहिलो उपन्यास, संघर्ष । छपाउनका लागि दौडधुप चल्छ तर जताततैबाट अस्वीकार । हिउँदको एक दिन त्यसैलाई जलाएर न्यानो ताप्छे । त्यसपछि पनि तीनवटा उपन्यासका पाण्डुलिपिहरू त्यसै गरी जलाई उसले । लेख्न नसक्ने रैछु भन्ने पीडा, शरीरमा बढ्दै गरेको दुखाइको पीडा, आर्थिक संकटको पीडा । थपिँदै छन् पीडाहरू । बाबुको जिद्दीपन र अभिमानले दिएको पीडाले पनि ऊ पिल्सिरहन्छे । बाहिर अरू डाक्टरसँग सरसल्लाह गर्न जँचाउन दिँदैनन् डाक्टर बाबु । जँचाउन जान पैसा पनि त छैन खासमा । उनैले अनुसन्धान गरेको औषधि ख्वाइरहन्थे तर ती औषधिले पटक्कै छुँदैनथ्यो ।
उनले अनुसन्धान गरेका औषधिहरू सबै मैले आफ्नो शरीरभरि थापिदिएकी छु । अनुसन्धानको नातामा । उनको मर्यादाको नातामा । (अध्ययन र संघर्ष, पृष्ठ १४४, निर्माण प्रकाशन)
त्यसपछि सुरु भएथ्यो उसको कोडोपाइरिन यात्रा । तकियामुनि औषधि नभएको दिन ऊ स्वाट्ट पारिदिन्थी एक गिलास रक्सी र गुडुल्किदिन्थी । ब्युँभँmदा अलि कम भएको जस्तो हुन्थ्यो दुखाइ । दुखाइ र अभावैमा बीए पास गरिन् पारिजातले । काम गर्ने जोस थियो । केही समय विजय स्मारकमा पढाइन् पनि तर बिस्तारै बिग्रिँदै गयो स्वास्थ्य । २०१७ सालतिरबाट त उनी लगभग ओछ्यानमै थन्किइन् । हावा फेर्नका लागि केही समय दार्जिलिङ पनि आउने जाने चल्यो तर फेरि पनि ज्यान उस्तै, बिमार उस्तै । सबैभन्दा बढी शारीरिक र मानसिक कष्टकर समय थियो २०१९ देखि २०२१ सालसम्म ।
त्यसै समय घोर पीडाले घेरिइँदा निराशा, छट्पटी, एक्लोपन, मृत्यु र अनेकन विसंगतिले भरिएका कविताहरू लेखिन् । ‘लाहुरेलाई रोगी प्रेमिकाको पत्र’, ‘मृत्युका अँगालामा’, ‘नसोध यो घाउ’ हरू त्यसै समय लखिएका कविताहरू हुन् । मृत्युको लालसा बोकेका यी हरफहरू चिमोटी जान्छ मन—
मलाई त मर्नु छ
आफैंले हेरिरहनु छ सिद्धिएको, गलिरहेको आफूलाई
ए । कसो विलिन नहुँला त एक दिन ।
के छ र मेरो मानिस हुँ भन्ने दाबी
एक मुट्ठी गलेको मासु
र एक सानु बन्डल थाकेको हाड
त्यत्ति नै, त्यत्ति पनि कुन्नि । (मृत्युका अँगालामा) थलिएको बखत, उपायहीन भएको बेला, शरीरको पीडाले पराकाष्ठा चुमेको बखत जन्मिन्छ एउटा ऐतिहासिक कृति, ‘शिरीषको फूल’ । चर्चा, चासो, खासखुस, कुरा कटाइ, नाम, बदनाम सबैसबै हुन्छ ओछ्यान परेकी पारिजातको । ऊ आफैंले स्विकारेकी छ कि घोर निराशाको कथा थियो शिरीषको फूल । तर पीडा र निराशा पनि उनले स्विकारेरै अगाडि बढेकी हुन् । शरीर र मन दुवैको पीडाले थिलथिलो भएको बखत पनि उनी सहजै भनिदिन्छिन्—
‘कहिलेकाहीं सोच्छु आह । कति नशालु छ मेरो यो दु:ख, केही नहोस् जीवनमा सहनुको रमाइलोपन छ ।’ (अध्ययन र संघर्ष, पृष्ठ १४२)
मन दुखेको बखत सम्झन्छु पारिजातका यही हरफहरू अनि नशालु महसुस हुन्छ आफ्नै पीडा पनि ।
मलाई तिम्रो स्वाभिमान बेहद प्रिय लाग्छ । उपचार खर्चका लागि प्रज्ञालाई बिन्तीपत्र लेख भन्ने सिद्धिचरण श्रेष्ठ र दान खालिङको अनुरोधमा तिमीले भनेकी रहेछौ—
मजस्तै उपचार नपाएर थन्को लाग्ने थुप्रै छन् नि दाइ, किन मैले मात्रै त्यो अधिकार पाउनुपर्छ र ? (पृष्ठ ८७ एउटा चित्रमय सुरुआत) यी हरफहरू पढेपछि त तिमीप्रतिको सम्मान आकाशियो । फलफूल खान भनी सरकारबाट आएको पैसा पनि तिमीले नछोई नै फर्काइदिएकी रहेछौ । क्षणक्षणको पैसाको आवश्यकता अनि पैसाकै संकट तर त्यस अवस्थामा पनि तिमीले कसरी त्यो स्वाभिमान कायम गर्न सक्यौ ? डाक्टर बाबुबाट सरेको क्लास एट्टिट्युड हो ?
पामिस्ट्रीको ढड्डु पुस्तक पढेर साथीहरूको हात हेरिदिएको प्रसंग पढ्दा अजिब लाग्छ । जे पनि पढ्न सक्ने पेसेन्स भएकी तिमी, सिबाय कोर्सको पुस्तक । अचम्म ती तिम्रा अनौठा स्वभावहरू । अनि तिम्रो फूलप्रेम । वाह! अझ पनि सुकन्या दिदीले जोगाएर राखिदिनुभएको छ तिम्रो कोठामा भएको त्यो बिरुवा ।एक भलाकुसारीमा सुकन्या दिदीले कुरो उप्काउनुभएथ्यो ।
प्रत्येक साँझ तिमी पकौडासँग लोकल पिउँथ्यौ रे । कुरा सुन्दासुन्दै मलाई पनि रहर लाग्यो र त्यसै साँझ मैले पकौडासँग दुई पेग रम पिएँ । एक बौलट्ठीपनासहितको साँझ बिताए । दिमग रङमरिँदै गर्दा तिम्रो नाममा केही लाइन कोरे डायरीमा । अलिकति रन्थनाई भर्खरै पढिभ्याएको तिम्रो आत्मसंस्मरण अध्ययन र संघर्षको बाँकी नै थियो मभित्र । तिम्रा ती भव्य संकटको समय, मनको पीडा, औषधि गर्न पैसाको समस्या र बढ्दै गरेको शरीरको दुखाइ । त्यसै समय तिमीले साथ लिएको पेनकिलर र रक्सीको साथ, पढेकी थिएँ ।
आर्थिक अवस्थाले पनि साथ दिँदैन, अनि म कोडोपाइरिनमा अवलम्बित हुन्छु । तकियामुनि कोडोपाइरिन सिद्धिए म रक्सी पिइदिन्छु । (अध्ययन र संघर्ष, पृष्ठ १४४, निर्माण प्रकाशन )
तिम्रा किताब र लेखाइका कुरा त सबैले गरेकै छन् प्रिय पारिजात । मलाई त केवल गर्नु थियो केही क्षण भलाकुसारी तिम्रा ती बिलकुल अन्तरंग समयसँग, बस् । लाखौं सम्झना ।
प्रकाशित : वैशाख १, २०७५ ११:३७